Taovolon’ny Printsy Vavy Leia Tsy Avy Any Amin’ny Vahindanitra Lavitra, Lavitra Any · Global Voices teny Malagasy
Taovolon'ny Printsy Vavy Leia Tsy Avy Any Amin'ny Vahindanitra Lavitra, Lavitra Any
Voadika ny 30 Janoary 2017 3:40 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Français, Ελληνικά, 日本語, Português, Español
Ny Printsy vavy Leia, ilay mpandray anjara malaza nolalaovin'i Carrie Fisher. Sary ao amin'ny Flickr avy amin'ny mpampiasa Foxspain Fotografía (CC BY 2.0).
Andro vitsivitsy talohan'ny faran'ny taona 2016, nanao veloma farany ilay mpilalao sarimihetsika malaza Carrie Fisher izao tontolo izao, izay nodimandry talohan'ny hahatongavan'ny faha 60 taonany ny 27 Desambra, andro efatra taorian'ny naharariany vokatry ny aretim-po teny mbony sidina avy any Londonaho any Los Angeles.
Na nitàna anjara toerana maro aza izy, fantatra kokoa i Fisher tamin'ny nitazonany ny toeran'ny Printsy vavy Leia tao amin'ilay horonantsary an'habakabaka mampitolagaga, Star Wars.
Raha vao nivoaka ny vaovaon'ny fahafatesan'i Carrie Fisher, rakotry ny antsa ho an'ilay mpilalao sarimihetsika ny haino aman-jery sosialy manerana izao tontolo izao, anisan'izany ireo sary an'aliny, raha tsy an-tapitrisany mampiseho ankizivavy kely maka tahaka ny taovolo malazan'ny Printsy Vavy Leia, izay ho fantatrao amin'ny alalan'ny volo mihodinkodina eo amin'ny lafiny roa amin'ny lohany.
Tao amin'ny tafatafa navoakan'ny gazety Time tamin'ny taona 2002, George Lucas – ilay lehilahy namorona ny Star Wars – dia nilaza ho nahita aingam-panahy tao amin'ireo vehivavy avy amin'ny Revolisiona Meksikana (tany am-piandohan'ny taonjato faha-20), fantatra amin'ny anarana hoe soldaderas:
Niaraka taminà karazana vehivavy manana endrika revolisionera tany atsimo-andrefan'i Pancho Villa aho, izay toy izany. Raha tsorina ilay taovolo dia avy any Meksika tamin'ny fiandohan'ny taonjato.
Iza ireo soldaderas?
Araka an'i Mi Sazón, io anarana iantsoana ireo vehivavy izay niady tamin'ny Revolisiona Meksikana io dia avy amin'ny teny Aragonesa soldada, nampiasaina mba ilazana ny vola naloa noraisin'ny sasany tamin'izy ireo ho sandan'ny asa nataony:
Ireo antsoina hoe soldaderas dia ireo Meksikana vehivavy rehetra tsy fantatra anarana izay nisoratra anarana hiady miaraka amin'ny hery revolisionera. Miaraka amin'ny fahasahiana sy di-doha goavana, niadian'izy ireo ny mba hahazoana fiainana mendrika ny sarangan'ny mpiasa rehetra any ambanivohitra, ireo mpiasa ireo no tompon'andraikitra amin'ny asa mafy indrindra, nefa tena kely karama, [izy ireo] saika mandrakariva nanao vy very ny ainy noho ny fitiavan-tenan'ny mpampiasa. Tsy niandry ny miaramila ny sasany amin'ireo vehivavy ireo mba hanoratra ny anarany, nivoaka izy ireo mba hitady ny miaramila.
Ao amin'ny lahatsorany “Las Soldaderas, Mujeres de Armas Tomar” (Soldaderas, Vehivavy Natao Hoheverina),nohazavain'ilay Meksikana mpahay tantara, Elena Poniatowska, ny maha-zava-dehibe izany:
Raha tsy misy soldaderas tsy misy ny Revolisiona Meksikana; notazonin'izy ireo ho velona sy nampamokariny izany, toy ny taninketsa, ka nokolokoloiny nandritra ny taona maro […], raha tsy nisy ireo vehivavy ireo, tsy afaka nisakafo na natory na niady ny miaramila. “Ny afaka amintinana azy, tena mafy ny fepetra niainan'izy ireo.
Ireo vehivavy ireo no nanome an'i George Lucas aingam-panahy ka nanomezany an'ilay mpandray anjara fototra ilay taovolo tokana.
Ny Mpanoratra sady mpampianatra, Eric Tang, nizara ity lahatsoratra ity taorian'ny nitsidihany ny fampirantiana tao amin'ny Mozean'ny Taokanto tao Denver, any Colorado, izay nahitany sary toa manaporofo ny fiavian'ilay taovolo.
Soratra eo amin'ny sary: “Tany amin'ny fampirantiana Star Wars tao amin'ny Mozean'ny Taokanto tao Denver, tsy ela akory izay ary dia nahalàla fa ilay taovolo malàzany dia nalaina taminm-pitiavana avy amin'ny an'ireo vehivavy tamin'ny Rovilisiona Meksikàna. Toy izany no andresenareo ny Fanjakàna”
Ny vehivavy eto amin'ny sary dia fantatra amin'ny anarana hoe Clara de la Rocha, vehivavy Meksikana revolisionera iray, ary zanakavavin'ilay revolisionera mahery fo Herculano de la Rocha.
Na izany aza, Tabea Linhard, ny mpanoratra ny “Vehivavy Tsy Nanan-tahotra tao amin'ny Revolisiona Meksikana sy ny Ady an-trano Espaniola,” nilaza tamin'ny BBC hoe:
[…] Te-hiteny aho hoe ny taovolon'ny Printsy vavy Leia dia miorina amin'ny ‘soldaderas’ avy amin'ny Revolisiona Meksikana, tsy voatery ho izany koa anefa. “[…] Raha mijery sary avy amin'izany vanim-potoana izany ianao, mahita vehivavy lava volo mirandrana, ny sasany manao satroka, misy fotoana saronan'izy ireo amin'ny lamba ny volony […] Noho izany ny taovolo toy ny an'i Leia angamba dia tsy tena safidy tsara.
Nitondra ny anjara birikiny momba ilay olana koa ireo mpampiasa Twitter.
Nanizingizina ny sasany hoe tena marina izany rehetra izany;
Tsy vazivazy io. Nahita aingam-panahy tamin'ny soldaderas-n'i Pancho Villa i George Lucas tamin'ny namorona ilay taovolon'i Leia.
Raha ny hafa kosa nametraka ny rohin'ny loharanono nofinidiny:
Aingam-panahy avy amin'ireto vehivavy ireto ny taovolon'i Printsy vavy Leia.
Mahagaga saingy marina! nalaina tamin'ny an'ilay Meksikana Revolisionera Clara de la Rocha: https://t.co/0rpq3HxbMb pic.twitter.com/0WI5zDTZql ny taovolon'i Printsy vavy Leia ao amin'ny #StarWars